Ciidanka Falastiin oo xiray siyaasiyiin lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen heshiiska Israel iyo Imaaraatka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ciidanka Falastiin oo xiray siyaasiyiin lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen heshiiska Israel iyo Imaaraatka
Xoogaga amniga Falastiin ayaa xirey tiro k amid ah taageerayaasha siyaasiga Falastiiniga ah ee dibad joog ah kuwaas oo lagu eedeeyey in ay Imaaraadka kala shaqeeyeen heshiiska Isreal iyo Imaaraadka ee dhowaan la saxiixay, sida uu sheegay afhayeen u hadlay kooxdaas.
Siyaasiga Mohammed Daxlaan ayaa ku nool dalka Imaaraadka Carabta ka dib markii laga musaafuriyey dhulka Isreal gumeysato ee Daanta Galbeed 2011, arrintaas oo timid markii si weyn isku khilaafeen Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo xisbigiisa Fatax oo Daxlaan xubin ka ahaa.
Dalalka khaliijka carabta ayaa dhawaan waxay heshiis la galeen qaarkood Isreal waxayna taasi abuurtay in Daxlaan lagu eedeeyo in uu arrintaas door ku leeyahay.
Kooxda Daxlaan ayaa dalalka Carabta ku dhaleeceysay xiriirka ay la yeesheen Isreal ka hor inta aan xal loo helin mushkuladda Falastiin, hase yeeshee ma uusan inkirin doorkiisa ku aadan arrintan socota.
Isniintii, laamaha amniga Falastiin ayaa xirey todobo kamid ah taageeriyaasha kooxda Maxamed Daxlaan, sida uu sheegay afhayeenka kooxdaas Imad Muxsin, waxaa uu intaas ku daray in xariga dadkan ay siyaasad ku lug leedahay.
War qoraal ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka Falastiin ayaa lagu sheegay in Xalabi laga soo xirey xaafada magaalada Nablus oo u dhow Daanta Galbeed, waxaana lagu sheegay bayaanka in talaabadan ay qeyb ka tahay soo celinta amarka iyo kala dambeynta degaanka.
Qoraalka laguma xusin magaca dadka kale oo la soo xirey, wasaaradda arrimaha gudaha Falastiina ayaa sidoo kale ka gaabsaday in ay ka hadasho arrintan.
Madaxii hore ee ciidanka amniga jiidda Gaza, Daxlaan ayaa muddo dheer ahaa ninka la aaminsanaa in uu bedeli doono Maxamuud Cabbaas, xiriir weyn oo saaxiibtinimona la yeeshay Imaaraadka tan iyo intii uu musaafuris ahaan ugu noolaa wadankaas.
Imaaraadka iyo Baxreyn ayaa xiriri diplomaasiyadeed la saxiixday Isreal todobaadkii hore xaflad uu martigeliyay madaxweyne Trump.
Heshiiska wuxuu ahaa kii ugu horeeyay oo dhex mara dalalka Carabta qaarkood iyo Isreal muddo ka badan 20 sano, Falastiiniyiinta ayaa heshiiskaas ku tilmaamay khiyaano lagu sameeyay qadiyadda Falastiin.
Ciidanka Falastiin oo xiray siyaasiyiin lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen heshiiska Israel iyo Imaaraatka was last modified: September 22nd, 2020 by Admin